Simba renharaunda rinopenya kuburikidza neIMEX America kudzidza chirongwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Simba renharaunda rinopenya kuburikidza neIMEX America kudzidza chirongwa
Sekureva kweDalai Lama: "Pasina nzanga yevanhu, munhu mumwe chete haangararame." Kukosha kwenharaunda kunonzwika pachirongwa chedzidzo chese paIMEX America, Mbudzi 9-11, nezvirongwa zvinofukidza simba rekutaura nyaya, tsika dzakagovaniswa, uye hunhu hwevanhu.
Dzidzo yemahara inovhara simba rekutaura nyaya, tsika dzakagovaniswa uye hunhu hwevanhu.
Mutori wenhau Sharad Kharé achaendesa musangano pamusoro pekutaura nyaya uye neunyanzvi husingazivikanwe hwekuteerera nyaya.
Sharad achatungamira vatori vechikamu kuburikidza neyekudyidzana yekubvunzurudza kurovedza muviri kukurudzira vamwe kuti vafunge kuti nyaya yemunhu inogona kuumba sei nhaka yavo.
Huchenjeri hwaDalai Lama hunonyatso kuzivikanwa kumutori wenhau Sharad Kharé uyo akamugamuchira akamunyora, pamwe chete nemamwe mazita makuru muHollywood, bhizinesi, uye tsika, sechikamu chebasa rake semubati-mubatanidzwa weHuman Biography. Sharad ichaendesa musangano pamusoro pekutaura nyaya uye hushoma-hunozivikanwa hunyanzvi hwekuteerera nyaya. Muchikamu chechipiri, "Ndeipi nhaka yako?" Sharad achatungamira vatori vechikamu kuburikidza nechiitwa chekudyidzana chekubvunzurudza achikurudzira vamwe kuti vafunge kuti nyaya yemunhu ingamise sei nhaka yavo.
Sharad Kharé, Co-Muvambi weHuman Biography
TED-dhiraidhi hurukuro inoratidzira mukati mehunhu hwevanhu
Human Biography ndeimwe yemasangano matatu ari kuendesa nekukurumidza-moto hurukuro dzeTED-panguva yekuratidzira. Idzi hurukuro dzinotenderedza kwakasiyana maitiro ehunhu hwevanhu. Wadiwa Nyika isangano rakagadzirirwa kubatsira zvikwata - kubva kune nyeredzi dzemitambo kusvika kune vezvemabhizinesi - kukurumidza kugadzira zvisungo zvakadzika midzi. Maitiro avo ekutaura nyaya anotsigirwa nesainzi uye timu inotsanangura kuti "ongororo dzakaratidza kuti kuwana chirevo chakanaka muzviitiko zvakapfuura kunosangana nekufunga kwakazara kwako uye kugutsikana kwehupenyu hukuru." Kubatana navo TLC Shumba yakavambwa naGian Power uyo akasiya nyika yemakambani mushure medambudziko remhuri ndokuvaka nharaunda. Mhedzisiro iyi iboka repasirese revanhu vasinganzwisisike - "shumba" - vanogovana nyaya dzavo, hondo uye kukunda kuitira kutsigira uye kukurudzira vamwe. Gian anotsanangura kuti: “Ndiri kuita basa rekugadzira nzvimbo dzebasa kuti dzikwezve mupfungwa, nzvimbo dzaunovimba nevaya vakakukomberedza, uko zvikwata zvinoita senge mhuri dzechipiri. Haisi chete chinhu chakakodzera kuita asi ibasa rinokosha uye rakanangana nekugadzirwa kwemunhu uye bhizinesi. "
Nheyo yakasimba iyo inobatanidza nharaunda yakagoverwa tsika - kwete huwandu hwevanhu. Izvi zvinoenderana naDavid Allison, muvambi weValuegraphics. Nyanzvi mune hunhu hwevatengi, David chipangamazano kumakambani epasi rose uye mutsigiri anotungamira wekurasa mararamire echinyakare. Mune yakasarudzika Headliner chikamu chevamiriri veIMEX America, achaburitsa mhedzisiro yekuputsa-pasi kudzidza kuongorora zviitiko zvekupinda muchiitiko nekubatanidzwa mushure mehosha. Izvi zvinoteverwa neakateedzana emusangano mumazuva matatu echiratidziro kusanganisira imwe inorondedzerwa se "chikamu-mutambo showa, chikamu chewekishopu" chakagadzirirwa kubatanidza iwo madhi pakati peakakosha tsika dzevanhu uye hunyanzvi hutsva-inotungamirwa chiitiko dhizaini mazano.
Wepasi rose mugadziri wechiitiko Melissa Park anotorawo nzira nyowani yekufunga zvakare zviitiko mune yakachinja mamiriro ebhizinesi. Mumusangano wake Kugadzirisazve chiitiko chiri-chemunhu iye achapa zano pamusoro pekuti ungasanganisa sei simba uye kunakidzwa kwechiitiko cheupenyu nerunyararo uye rwakachengeteka ruzivo, kugovana zvidzidzo kubva kune vanogadzira mimhanzi.
Dzidzo yakakodzera nguva yakagadzirirwa tese tiraira dzekufunda
Carina Bauer, CEO weImEX Group, anotsanangura kuti sei dingindira renharaunda rakakodzera nguva. Kune vazhinji vari muindasitiri, iyo showa inomiririra yakasarudzika mukana wekusangana nevavanoshanda navo uye vavakabatana navo vavasina kumboona mune angangoita makore maviri. Tinoda kupa vatinopinda navo mukana wekubatanidza zvakare uye kusimudzira hunyanzvi hwavo, nematurusi ekugadzira nharaunda dzavo pamisangano yavo nezviitiko. "Saka, takaumba chirongwa chedu chekudzidza tichitarisa zvinhu zvakasiyana zvazvinoreva kuvaka uye kuva chikamu chevanhu - uye zvikamu zvedu zvekudzidza zvinotungamirwa nevamwe vanokurudzira vane nyaya dzinoshamisa dzekutaura."
Iyo yemahara yekudzidza chirongwa pa IMEX America inotangisa ne Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, musi wa8 Mbudzi uye inoenderera mberi neakawanda emusangano, matafura anopisa misoro nemisangano mukati memazuva matatu ekuratidzira - ese akagadzirirwa kugadzirisa akasiyana masitayimu ekudzidza.
IMEX America inoitika munaNovember 9-11 panzvimbo nyowani - Mandalay Bay, Las Vegas - ine Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8. Nyoresa mubereko pano.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve sarudzo dzekugara uye kuti bhuku tinya pano.